सम्पादकको अवशान | Infomala
म संस्थापक सम्पादक रहेको र पाँच वर्ष प्रकाशन भएको मेल टुडे आफैंमा विदेशी लगानीको कम्पनी हो। यसमा डेली मेल बेलायतको २६ प्रतिशत सेयर छ भने बाँकी इन्डिया टुडे गु्रपको लगानी छ। भारतकै ठुल्ठूला कर्पोरेट हाउस पनि सञ्चार माध्यममा आकर्षित भइरहेका छन्। उदाहरणका लागि, मुकेश अम्बानीको रिलायन्स इन्डियाले ‘नेटवर्क १८’ सञ्चालन गरेको छ, जसले सिएनएन–आइबिएन र आइबिएन–७ प्रसारण गर्छ। ओस्वाल गु्रपले न्युदिल्ली टेलिभिजन चलाउँछ। ब्ल्याकस्टोन प्राइभेट इक्विटीले जागरण मिडिया चलाउँछ, जसले दैनिक जागरण र मिड–डे प्रकाशन गर्दै आएको छ। मलेसियाको एस्ट्रो अल एसिया नेटवर्कले एनडिटिभी लाइफस्टाइल, टर्मरिक भिजन, सन डाइरेक्ट लगायत मिडियामा लगानी गरेको छ।
अखबार निकालिरहेका कम्पनी टेलिभिजन, रेडियो र अन्य डिजिटल माध्यमतिर आकर्षित भइरहेका छन्। टाइम्स अफ इन्डियाले ‘टाइम्स नाओ’ भन्ने टेलिभिजन च्यानल पनि प्रसारण गर्छ। एउटा मनोरञ्जनात्मक च्यानल पनि चलाउँछ। ‘रेडियो मिर्ची’ भन्ने एफएम स्टेसन पनि छ। इन्डिया टुडे गु्रपले अब ‘इन्डिया टुडे’ भन्ने साप्ताहिक पत्रिका मात्र प्रकाशन गर्दैन। रिडर्स डाइजेस्ट, मेन्स हेल्थ, प्रिभेन्सन, कस्मोपोलिटिन, हार्पर्स बजार लगायत अरू थुप्रैै पत्रिका पनि निकाल्छ, जसमध्ये धेरैको त हामीलाई नामसम्म थाहा छैन। यतिमात्र होइन, इन्डिया टुडे गु्रपले पाँचवटा टेलिभिजन च्यानल र एउटा रेडियो पनि चलाइरहेको छ। उता जिटिभीले पत्रिका व्यवसायमा हात हालेको छ। यसले मुम्बईबाट प्रकाशन हुने डिएनए पत्रिकामा लगानी गरेको छ।
नयाँ लगानीको प्रवेशसँगै थुप्रै यस्ता व्यवसायीले सञ्चार माध्यममा हात हालेका छन्, जसको छवि विश्वसनीय छैन। यसले पत्रकारिताको आचारसंहितामै ठूलो प्रभाव पारेको छ। उदाहरणका लागि, पञ्जाबका एक लोकप्रिय कंग्रेस नेताले टेलिभिजन च्यानल र अखबार चलाउन थालेका छन्। उनका छोरा मनु शर्मा बहुचर्चित जेसिका लाल हत्याकाण्डका मुख्य दोषी हुन्। यो हत्याकाण्डले पूरै भारतलाई हल्लाइदिएको थियो। जेसिका लाल एउटा पार्टीको बारमा काम गरिरहेकी थिइन्। मनु शर्मा र उनका साथीले राति अबेर आएर रक्सी मागे। बार बन्द भइसकेको थियो। जेसिकाले रक्सी दिन इन्कार गरिन्। रिसको झोंकमा मनु शर्माले पेस्तोल निकालेर गोली चलाए। यसले ती नेताको परिवारलाई नै बद्नाम गर्योर। उनले कुनै पनि अखबार र सञ्चार माध्यमबाट छोराको पक्षमा समर्थन जुटाउन नसकेपछि आफैं टेलिभिजन च्यानल स्थापना गरे। अहिले उनीहरूको दुइटा टेलिभिजन च्यानल छ— न्युज एक्स र लाइभ इन्डिया टिभी। ‘सन्डे गार्डियन’ नामको अखबार पनि किनेका छन्।
बजार विस्तारको कुरा गर्दा सन् १९९३ मा फर्कनुपर्छ, जतिखेर भारतीय सञ्चार माध्यमका लगानीकर्ताले त्यही बाटो अवलम्बन गरे, जुन रुपर्ट मर्डकले लन्डनमा लिएका थिए। उनले आफ्नो अखबार ‘टाइम्स लन्डन’ लाई बढीभन्दा बढी पाठकसम्म पुर्याकउन मूल्य घटाउने नीति लिए। धेरै पत्रकारले उनको नीति मन पराएनन्। उनीहरूले टाइम्स लन्डन छाडेर ‘इन्डिपेन्डेन्ट’ लगायत अखबार स्थापना गरे। बजार रणनीतिको दृष्टिबाट हेर्दा रुपर्ट मर्डकको रणनीति एकदमै राम्रो हो। यसैको सिको गर्दै भारतमा टाइम्स अफ इन्डियाले १९९३ अप्रिलदेखि आफ्नो मूल्य २ रुपैयाँ ५० पैसाबाट घटाएर १ रुपैयाँ कायम गर्योम। टाइम्स अफ इन्डियाले मूल्य घटाएपछि अरू अखबार पनि यही बाटो पछ्याउन बाध्य भए। हिन्दुस्तान टाइम्स, इन्डियन एक्सप्रेस, स्टेट्सम्यान सबै मूल्य घटाउनतिर लागे। भारतका सम्पूर्ण अंग्रेजी अखबारले साबिकको तुलनामा आधा भाउ घटायो।
बजार विस्तारको अर्को कारण प्रविधिमा आएको परिवर्तन पनि हो। सन् ७०/८० दशकमा भारतमा अखबार चलाउन जर्मनी, स्विडेन लगायत मुलुकबाट प्रिन्टिङ प्रेस आयात गर्नुपर्थ्यो। प्रेस अर्डर गरेर भारतसम्म आइपुग्न निकै समय लाग्थ्यो। ३६ पृष्ठको अखबार निकाल्ने प्रेस अर्डर गरे, त्यसलाई ‘एसेम्बल’ गरेर भारत ल्याइपुर्यापउन तीन वर्ष लाग्थ्यो। अचानक केही यस्ता भारतीय कम्पनी आए, जसले प्रिन्टिङ मेसिन निकै कम समयमा डेलिभरी दिन थाले। तीन महिनादेखि छ महिनाकै बीचमा। त्यसको मूल्य पनि पहिलेको तुलनामा निकै सस्तो थियो। यही कारणले हो, सन् १९५८ मा एउटा मात्र संस्करण निकाल्ने ‘दैनिक भाष्कर’ले ५८ वटा मूल संस्करण निकालिरहेको छ। यी मूल संस्करणअन्तर्गत २५ वटा राज्यमा १ सय ५९ सहायक संस्करण प्रकाशन भइरहेका छन्। संस्करण धमाधम थपिन थालेपछि समाचारको विषयवस्तु पनि स्थानीय पाठकको रुचिलाई ध्यानमा राखेर त्यसैबमोजिम समायोजन गर्न थालिएको छ। जस्तो, दैनिक भाष्करका ५८ वटै संस्करण फरक–फरक छन्। ती फरक राज्यबाट प्रकाशन हुन्छन् र फरक खालका पाठकको रुचिलाई सम्बोधन गर्छन्।
यस्तो खालको बजार विस्तारले पत्रकारिताको विकास गर्दैन। उल्टो पत्रकारिताको विषयवस्तुमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गराउँछ। किनकि, त्यो अवस्थामा हामी पत्रिका बेचिरहेका हुँदैनौं, पाठक किनिरहेका हुन्छौं। पाठक पनि कस्ता भने, धनीमानी, समाजमा प्रतिष्ठित, राम्रो प्रोफाइल भएका, चिप्लोचाप्लो, मोटाघाटा। दिल्लीको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा दक्षिणी भाग, गुडगावँ, नोयडामा बसोबास गर्ने। यसको निम्ति हामी बढीभन्दा बढी त्यस्तै व्यक्तिका प्रोफाइल छाप्छौं। उनीहरूसँग सम्बन्धित वा उनीहरूलाई चासो हुने हल्काफुल्का गतिविधिका समाचार दिन्छौं। पार्टीका समाचार, लुगाफाटो कस्तो लाउने, कसरी सुन्दर–सुन्दरी देखिने, बगैंचा कसरी सिँगार्ने आदि। यस्ता विषयवस्तुले पाना भरेर हामी आफ्नो पत्रिका बेचिरहेका हुँदैनौं, तिनै धनीमानी पाठक किनिरहेका हुन्छौं, जसलाई हामीले लक्ष्य गरेका छौं। अन्ततः तिनै पाठकका आधारमा हामी विज्ञापनदाता कम्पनीसँग बार्गेन गर्छौं। उनीहरूलाई भन्छौं, ‘हेर, हाम्रो अखबार फलानो–फलानो ठाउँको फलानो–फलानो समूहका मान्छेले पढ्छन्, तिमीहरूको लिपिस्टिक, फेयरनेस क्रिम वा स्याम्पु प्रयोग गर्ने समूह त्यही हो। हामीलाई विज्ञापन दियौ भने तिमीहरूको लक्षित उपभोक्तासम्म पुग्छ।’
टेलिभिजनमा यही नियम लागू हुन्छ। धेरै च्यानलले ‘मेरी बीवी डायन हैं’, ‘भूतोंकी शादी’ जस्ता कार्यक्रम प्रसारण गर्नुको प्रयोजन यही हो। बढी दर्शक तान्ने र त्यही दर्शक बेचेर धेरै विज्ञापन बजाउने। कार्यक्रम प्रसारणको समय पनि त्यसैबमोजिम निर्धारण गरिन्छ। दिउँसोको समय गृहिणीहरूलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम। साँझ फेरि गृहिणीहरूकै निम्ति धारावाहिक। राति अपराधसम्बन्धी कार्यक्रम। यस्तो लाग्छ, टेलिभिजनवालाहरूले प्रत्येक सेकेन्ड बिक्रीमा राखेका छन्।
बजार विस्तारको यो प्रक्रियामा पत्रकारहरूको तलबसुविधा भने बढेकै छ। यो राम्रो पक्ष हो, तर यसका नराम्रा पक्ष पनि छन्। बजार विस्तारमा अखबारको सम्पादकभन्दा मार्केटिङ प्रबन्धकको भूमिका बढी छ। त्यही भएर अखबारलाई सम्पादकले भन्दा मार्केटिङ प्रबन्धकले बढ्ता निर्देशित गर्छ। उनीहरू नै समाचार कक्षभित्र छिरेर सम्पादक र पत्रकारहरूलाई ‘यस्तो खालको विषयवस्तुमा समाचार लेख्नुपर्योक’ भनेर निर्देशन दिन थालेका छन्। उनीहरूको जोड भनेको हमेसा अखबारको आम्दानी नै हुन्छ। यसको निम्ति पैसा खर्च गर्नसक्ने समूहमा केन्द्रित विषयवस्तु खोज्न लगाइन्छ। गरिबका मुद्दा वा वृद्धवृद्धाका सरोकारभन्दा पैसा खर्च गर्नसक्ने उमेर समूहले के पढ्न चाहन्छन् वा उनीहरूको चासो केमा छ भन्ने विषयले अखबारमा बढी प्राथमिकता पाउँछ।
हिन्दुस्तान टाइम्सकै उदाहरण लिउँ। मैले सन् २००० मा यो अखबार छाडेँ। त्यसयता यसको डिजाइन चारचोटि परिवर्तन भइसक्यो। डिजाइन परिवर्तनको एउटै कारण युवा पुस्तालाई आकर्षित गर्नु नै हो। किनकि, उनीहरू १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका लागि लक्ष्य गरेर अखबार निकालिरहेका छन्। तर, डिजाइन परिवर्तन गरेर मात्र सधैं काम गर्दैन, विषयवस्तुमा पनि नयाँपन ल्याउनुपर्छ। त्यसो भए विषयवस्तुमा नयाँपन दिने भूमिका त सम्पादककै होला नि, होइन? गलत। यो काम पनि मार्केटिङ प्रबन्धहरूले नै गर्छन्। उनीहरू नै सम्पादक र संवाददातालाई भन्छन्, ‘हाम्रो अखबार यो उमेर समूहको र यतिदेखि यतिसम्म आय गर्ने समूहकाले पढ्छन्, उनीहरूलाई मनपर्ने विषयवस्तु खोज्नुपर्योम। उनीहरूलाई लाइफस्टाइल मन पर्छ। ब्रान्डेड घडीको सोख राख्छन्। महँगा गाडी चढ्न रुचाउँछन्। उनीहरू जे खोजिरहेका छन्, त्यही बेच्नुपर्यो।’
कहिलेकाहिँ परराष्ट्र मामिला वा राजनीतिक विषयमा विश्लेषण वा समाचार टिप्पणी लेखाउनुपर्यो् भने भूतपूर्व प्रशासकको हातमा कलम थमाइन्छ। पछिल्ला १० वर्षमा सेवानिवृत्त भएका प्रशासकहरूलाई हेर्ने हो भने ती अखबारका स्तम्भकार बनेको पाइन्छ। यदि यस्ता ‘कथित’ विशेषज्ञलाई नै विश्लेषण गराउने हो वा टिप्पणी लेखाउने हो भने अखबारले आन्तरिक रूपमा विशेषज्ञ पत्रकार उत्पादन गर्न मिहिनेतै किन गर्नुपर्यो? कतिसम्म भने, सम्पादकीय लेखन पनि ‘आउटसोर्सिङ’ हुन थालेको छ। विदेशी विश्वविद्यालयमा पढ्नेलाई कुनै निश्चित विषयमा पत्रकार वा सम्पादकसँग कुराकानी गरेर सम्पादकीय लेखाउने प्रवृत्ति विकास हुँदै गएको छ। विचार पृष्ठका लागि विदेशी लेख–रचनाबाटै काम चलाइन्छ।
जब अखबार पूर्ण रूपमा विज्ञापनआश्रित हुन थाल्छ र सम्पादकको भूमिका गौण बन्दै जान्छ, तब त्यसका मालिकहरू सोच्न थाल्छन्, ‘मलाई सम्पादक नै किन चाहियो? म आफैं किन सम्पादक नबनुँ?’ यही सोचका कारण धेरै मालिकले आफूलाई सम्पादक वा प्रधानसम्पादक घोषणा गरेका छन्। यो अवस्थामा उसले जागिर दिएको कर्मचारी सम्पादक होइन, ऊ आफैं राजनीतिक नेता, राजदूत वा विदेशीहरूको निकट सम्पर्कमा आउँछ। कुममा कुम जोडेर हिँड्न थाल्छ। उसले आफैं प्रधानमन्त्रीलगायत ठुल्ठूला नेताहरूसँग एउटै जहाजमा सयर गर्ने अवसर पाउँछ।
हिन्दुस्तान टाइम्सको कार्यकारी सम्पादक हुँदा म आफूले थाहा पाएका सूचना व्यवस्थापनका एक वा बढीमा दुईजनालाई मात्र भन्थेँ। त्यही कुरा कुनै कर्पोरेट लबिइस्टको मुखबाट सुन्दा म छक्क पर्थें। ‘कसरी थाहा पायौं’ भनेर सोध्दा उसको जवाफ हुन्थ्यो, ‘तिम्रो बिजनेस सम्पादक वा संवाददाता प्रत्येक महिना मकहाँ आएर खाम लैजान्छ।’ अहिले त झन् यो ठूलो स्तरमा भइरहेको छ।यी सबै परिस्थितिमा स्वतन्त्र पत्रकारिता कसरी बाँच्न सक्छ?
विज्ञापन नै अखबार तथा टेलिभिजनको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो, बिक्री होइन। ठूला अखबारले विज्ञापनको ठूलो हिस्सा ओगटेको हुन्छ। करिब ८० प्रशित विज्ञापन त्यही अखबारमा जान्छ। बाँकी २० प्रतिशतमा ८० प्रतिशत दोस्रो नम्बरको अखबारमा जान्छ। यस्तोमा अरू अखबार कसरी चल्छन् त? उनीहरू आम्दानीका अन्य बाटा खोज्नतिर लाग्छन्। जस्तो, उनीहरू विषयवस्तु बेच्न थाल्छन्। आफूले उत्पादन गरेका विषयवस्तु अनलाइन वा डट कमहरूलाई बिक्री गर्छन्। भिडियो फुटेज छ भने टेलिभिजनमा पनि बिक्री हुन्छ। कतिपय सञ्चार माध्यमले आफ्ना पत्रकार लगाएर बैंक, बिमा, लगानी कम्पनीहरूको निम्ति अनुसन्धानको काम गर्छन्। त्यस्ता कर्पोरेट संस्थालाई राजनीतिक तथा आर्थिक विश्लेषणको खाँचो हुन्छ। उनीहरू आफ्ना पत्रकारमार्फत् त्यस्ता सामग्री तयार गराउँछन्। कर्पोरेट जगतका लागि प्रचारात्मक सामग्री उत्पादन गर्ने र प्रकाशन गर्ने काम पनि केही सञ्चार माध्यमले गर्छन्। यस्तोलाई ‘पेड न्युज’ भनिन्छ, जुन थुप्रै सञ्चार माध्यमको बाँच्ने आधार बनेको छ। ठुल्ठूला सम्मेलन आयोजना गरेर पनि कमाइ गरिरहेका छन् सञ्चार माध्यमले। आफूले छापेका समाचार, कार्टुन संकलन गरी किताब छपाएर पनि कमाइ भइरहेको छ।
भारतीय समाचार कक्षहरूमा इमानदारी र निष्ठा पनि मर्दै गएको छ। प्रत्येक वर्ष युवा पुस्ताको प्रवेश हुन्छ। भर्खरै पत्रकारितामा लागेका ती युवा जोसजाँगरका साथ साम्प्रदायिक द्वन्द्व, प्राकृतिक स्रोतसाधन दुरुपयोग, किसानले आत्महत्या गर्नुपरेको विषयजस्ता सामाजिक मुद्दा उठाउँछन्। तर, कर्पोरेट जगतको हालीमुहाली यस्तो छ, उनीहरू आफैं विस्तारै निराश हुँदै जान्छन्। यस्ता मुद्दामा समाचार नआओस् भनी हतोत्साही गराउन गलत व्यक्तिलाई जिम्मा दिने प्रवृत्ति पनि छ। जो जुन विषयमा पोख्त छ, उसलाई समाचार लेख्न नलगाएर अर्कै व्यक्तिलाई लगाउने गरिन्छ। यसले अनुसन्धानमूलक समाचार पनि आउँदैन, र समाचार राम्रो नभएर नछापेको भनी सजिलै पन्छिन पाइन्छ। सम्बन्धित क्षेत्रमा जानकार पत्रकारले लेखेको अनुसन्धानमूलक समाचार पनि पहिलो पृष्ठमा प्राथमिकतासाथ नछापी भित्री पृष्ठमा सानो बनाएर छाप्ने गरिन्छ। वा भनौं, लुकाउने गरिन्छ। कतिपय सम्पादक त ‘एउटा मन्त्रीलाई मात्र लक्ष्य गरेर किन समाचार बनाउनुपर्योग, हामी त ट्रेन्डमा जानुपर्छ, यस्तै खालका ६–७ वटा घटना खोजौं, अनि छापौं’ भनेर आफ्ना संवाददातालाई फर्काइदिन्छन्। अब उसले ६–७ वटा त्यस्ता घटना कहिले खोजोस् र उसको समाचार कहिले छापियोस्? यसरी राम्रा समाचार तुहाउने काम भइरहेका छन्, भारतका समाचार कक्षहरूमा। उदाहरणका लागि सोनिया गान्धीका ज्वाईं र उनको रियल स्टेट विवादबारे एकाधबाहेक समाचार लेखिएन। यति ठूलो घोटालामा अखबारहरू मौन रहे।
(एलायन्स फर सोसल डायलग (एएसडी) द्वारा यसै साता राजधानीमा आयोजित सार्वजनिक संवादमा भारत भूषणले दिएको प्रस्तुतिको सम्पादित नेपाली अनुवाद नागरिक (दैनिक) बाट लिइएको हो । २५ वर्षदेखि पत्रकारिता गर्दै आएका भूषण मेल टुडेका संस्थापक सम्पादक हुन्। उनी हिन्दुस्तान टाइम्सका कार्यकारी सम्पादक, टेलिग्राफ (दिल्ली) का सम्पादक, एक्सप्रेस न्युज सर्भिसका सम्पादक, इन्डियन एक्सप्रेसका वासिङटन संवाददाता र टाइम्स अफ इन्डियाका सह–सम्पादक रहिसकेका छन्।)
Previous Postसमाप्तिको बाटोमा नेपाली टेलिभिजनहरु
Next Postगुगलले इन्टरनेटबाटै गराउनेछ, ताजमहल भ्रमण